कस्तो अवस्थामा जान्छ सांसदको पद ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था | Nepal Flash
कस्तो अवस्थामा जान्छ सांसदको पद ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गएका चार सांसदहरु कारबाहीमा परेका छन् । अब उनीहरुको सांसद पद जानेछ । नेकपा भंग भएर माओवादी ब्यूँतिँदा पनि पार्टीमा नफर्किएका सांसदलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेश नम्बर–१ का सदस्यलाई पनि कारबाही गरिएको छ । नेकपा एमालेमा गएकाहरु कारबाहीमा परेका हुन् ।
उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपालसहित एमालेका चार नेतालाई ६ महिना निलम्बन गरेका छन् । निलम्बन भने पार्टीमा मात्रै भएकाले उनीहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य भने कायमै रहनछन् ।
कस्तोे अवस्थामा जान्छ सांसद पद ?
ऐनमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेमा पनि दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा २८ मा त्यस्तो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । ह्विप उल्लंघन गरेमा सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ ।
यस्तो छ ऐनको दफा १८ र ३१
दलले कारवाही गरेपछि दल त्याग भएको मानिने छ । यसकारण सांसद पद जाने छ ।
ऐनको दफा १८ मा यसबारे उल्लेख छ । अन्य दल (फुटेको अर्को दल)मा लागेमा वा गुप्त रुपमा सहयोग गरेमा पनि हुदैन, आरोप पुष्टि हुनेगरी दलले कारवाही गर्नुपर्छ। यसपछि अनुशासनको कारवाहीपछि पद जाने छ ।
सबैभन्दा पहिला कारबाहीका लागि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए दलले कारबाही गर्न सक्नेछ । ‘यी जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने त्यस्तो निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदहरुको विवरण सचेतकले दलको नेतालाई दिनुपर्छ । दलको नेताले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने र बहुमतले दल त्याग गरेको निर्णय गर्ने,’ अधिबत्ताहरु भन्छन् ।
कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी दिएपछि सभामुखले त्यसको १५ दिनभित्र बैठक चलेको भए बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्छ । नचलेको भए सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।